Ukuphulukisa impahla immortelle, ukusetshenziswa kanye contraindications.
Isitshalo sezokwelapha immortelle kanye nezakhiwo zayo
U-Immortelle, ogama lakhe lesibili liyi-cyme, kuthathwa njengotshani obungapheli. Ngokuvamile lesi sitshalo singatholakala engxenyeni yaseCentral Asia naseYurophu yezwekazi lethu. Ikhula ikakhulukazi endaweni enesihlabathi futhi enamadwala, kanye nasemadlelweni amakhulu. Ukwakhiwa kwezidakamizwa kubandakanya i-flavonoids, amafutha abalulekile, ama-tanins, i-coumarin, ama-acids ewusizo asebenzayo. Okuningi mayelana nokuthi yiziphi izindawo zokuphulukisa immortelle ezinomzimba wethu, ukuthi ungayithatha kanjani nokuthi yikuphi ukulinganiselwa - funda ngokuqhubekayo.
Lesi sitshalo sisetshenziswa kakhulu ekuphekeni kwemithi yendabuko. Ama-decoctions okuphekwe kanye nama-potions asekelwe ku-immortelle yi-choleretic enhle kakhulu, i-antiseptic, anti-inflammatory, ivuselela futhi i-antispasmodic. Kakade emva kokudla kokuqala kwemithi evela e-immortelle ngenxa yokujwayelekile kwe-viscosity nokuthuthukiswa kokwakhiwa kwe-bile, ukuphakama kwamandla okuphawulekayo kubonakala, ukwanda kwamandla nokusebenza kahle. Izingxenye ezisebenzayo ezakha i-immortelle zinciphisa amazinga e-cholesterol namazinga e-bilirubin egazini, elinomphumela omuhle esimweni sesisindo nesibindi somsebenzi. Ukunethezeka kwamavithamini, ama-antioxidants nama-flavonoids kwenza lesi sitshalo sibe ithuluzi elihle kakhulu ekwelapheni izikhuhlane nezifo zamaphaphu. Ngaphezu kwalokho, lezi zakhi ziyakwazi ukususa ubuthi, ukuvimbela uketshezi, ukuvimbela ukuguga.
Abaningi be-gastroenterologists banikeza inkambo yokwelashwa nge-immortelle broths yezifo ezinjenge-gastritis, isisu esiswini, ukuqotshwa, ukubola.
Ukungahambisani nokusetshenziswa kwe-immortelle
Njenganoma imuphi umuthi, lesi sitshalo sinemibono eminingi. Lezi zihlanganisa hypotension (low blood pressure) kanye nokwanda kwe-asidi yesisu. Ungaphinde usebenzise kabi umhluzi kusukela ku-immortelle, ngoba izingxenye zalolu isithombo zinezinto zokuqoqa emzimbeni, okwandisa umthwalo ezinso nasibindi. Ngesikhathi sokukhulelwa, ukuncelisa, ngaphambi kokuba ukwelashwa kudingekile ukubonana nodokotela.
Ukuze ukwelashwa kwezifo zesisu, isibindi kanye nokulungiselela ukukhuphuka umhluzi ulungele ukugeza umusi. Ukuze wenze lokhu, ama-2-3 nezinkezo zezimbali ezomile i-immortelle kumele igcwale ingilazi yamanzi abilayo bese ubamba cishe isigamu sehora ekugezeni kwamanzi. Phuza izikhathi ezingu-3 ngosuku ngaphambi kokudla.
Ngezinqubo zokuvuvukala, i-tincture yotshwala ye-immortelle izoba usizo. Ukuze wenze lokhu, amagremu angu-20 obuntshani obomile kufanele agcwaliswe ngilazi yotshwala noma i-vodka. Ukumelela izinsuku ezingaba ngu-10 ekamelweni elincane elimnyama. Ukuze uthole i-reception yangaphakathi, isipuni esisodwa senziwa ku-200 ml amanzi. Phuza ngesisu esingenalutho. Ngaphezu kwalokho, le tincture iyindlela enhle kakhulu yokunciphisa induna. Sula ubuso bakho okungaphezu kwesisodwa ngosuku, emva kokugeza.
Eqinisweni, lesi sitshalo esimangalisayo singatholakaliseka ngaphansi kwezinyawo zakho, kodwa manje nakanjani ngeke udlule ukuze ufunde ukuthi zingaki izici zokwelashwa ezikufihlayo. Njengoba ungabona, ngisho negama likhuluma ngokwalo.
Ukuvimbela imivimbo ye-varicose, amakhambi omuntu
Izakhiwo zokwelapha kasawoti wokudla
Yini okudingeka uyenze ukuze uphile?
Ukunakekelwa kwesisu ekhaya
Izindlela ezintsha zokwelashwa okunye
Ukungqubuzana kwe-Nasal: izimbangela, ukuxilongwa, izindlela zendabuko nezendabuko
Uhlelo lokuqeqesha impilo kaBarry's Bootcamp
I-Horoscope yezikali zanamuhla, ngonyaka ka-2010
Amakhekhe entwasahlobo yentwasahlobo yabesifazane
Indlela yokwenza isipiliyoni semisipha nomugogodla
Ukuphazamiseka ngokobulili kowesifazane
Imincintiswano nemidlalo yabantwana ngosuku lokuzalwa kwabo
Ingabe ukuzwelana nokuzwelana kudinga ukuphila?
Izingane kanye nesikole
Imfundo yezenzo zezingane: imithetho emithathu
Ukufunda ukusebenzisa ama-eyelashes amanga ngokwenza
Iresiphi ye-sauce enhle nesomuncu
Ukhilimu omuncu ngembewu ye-poppy